Obere oghere eriri afo Manufacturers & Suppliers - China Obere oghere mmiri eriri afo Factory
N'èzí egwuregwu hydration eriri afo
A na-eji eriri na-adịghị egbu egbu, nke na-enweghị isi, nke na-enweghị isi, nke dị nro ma ọ bụ nke polyethylene nke na-akpụzi ya. Enwere ike itinye ya na oghere ọ bụla nke akpa n'akpa ugwu n'oge ịrị ugwu, ịgba ígwè, na njem mpụga. Ọ dị mfe ijupụta na mmiri, dị mma ị drinkụ, na-a suụ ka ị na-a drinkụ, ma na-ebu. Soft na ala.
N'èzí Sport Hydration eriri afo Water Bag
Nke a bụ ihe dị mkpa maka ndị ọgba ọsọ. Ohere sara mbara na-enye gị ohere ịgbanye mmiri ngwa ngwa n'ọhịa. Ka ị ghara ichegbu onwe gị banyere mmiri mmiri mgbe ị na-emega ahụ, ma ghara ịlafu efu.
Kpakọba Portable Hiking Water Bag
O nwere akpachapughi anya meputara obere akpa mmiri ekpughere. Unique iche nke acha anụnụ anụnụ na nwa. Enwere ike ịhazi ya na nha ọ bụla ma ọ bụ ihe ịchọrọ, dị ka TPU, EVA, PEVA. Gụnyere ogologo mmezi mmịpụta ọkpọkọ. Uniquedị pụrụ iche nke ihe mkpuchi uzuzu nke ihe nkedo mmiri nwere ike izere ịnakọta ájá. Adabara dị iche iche nke n'èzí-eme.
BPA Free Hydration eriri afo Army Green
Army green n'èzí egwuregwu mmiri akpa, enwekwa obere oghere imewe. Nkà na ụzụ mbipụta dị elu, usoro akụkụ atọ. Ebumnuche e kere eke na-ekpuchi mkpuchi uzuzu. Naanị iji wetara gị ahụmịhe kachasị mma. Were ya maka njem dị n'èzí.
Maa ụlọikwuu Water Nchekwa eriri afo
A ga-enwerịrị ngwaahịa maka egwuregwu n'èzí. Leba anya na ọrụ ndị bara uru, obere ọrụ na nchedo gburugburu ebe obibi. Izute mkpa mmiri n'èzí. Food-ọkwa environmentally friendly ihe, na-eche free iji. O adabara maka ịrị ugwu, ịgba ígwè, ịgba ọsọ na egwuregwu ndị ọzọ dị n'èzí.
N'èzí Water Bag adaba High Quality
Ọ ga - abụ onye inyeaka kachasị mma n’èzí, ọ na - ebugharị, na - eyi uwe, na - adịgide, na - adịghị egbu egbu, n’enweghị isi. Ngwongwo nri-ewetara gị ahụmịhe kachasị mma. Ọ nwere ike ịrụ ọrụ magburu onwe ya n'èzí. Ka ị lekwasị anya n'ịgba ọsọ, ịgafe obodo, ma ọ bụ ịrị ugwu.
Maa ụlọikwuu Hiking igwe kwụ otu ebe mmiri Nchekwa Bag
Nke a bụ ihe na-atọ ụtọ obere oghere mmiri. Enyi na gburugburu ebe obibi na-enweghị ihe BPA. Ọhụrụ ọdọ mmiri na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ na-eme ka ị bụrụ onye na-egbuke egbuke na egwuregwu. Anyị nwekwara ike ịnye gị ọrụ ahaziri iche dịka ngwaahịa, ụdị, agba, na akara. Bụrụ onye naanị gị na-egwu egwuregwu n'èzí.
N'èzí Sport Liquid eriri afo
Onye kacha mma maka egwuregwu n'èzí. Portable, eyi na-eguzogide, sturdy na ihe. Ihe eji eme ka ihe di nma na gburugburu ebe obibi di elu na-enye gi ohere iga nso okike ma chebe ya. Ọ na-arụ ọrụ kachasị mma n'egwuregwu n'èzí dị ka ịgba ígwè, ịrị ugwu, ịgba ọsọ, na ịgafe obodo. Ka ị nye ike gị zuru oke na ike gị n'enweghị nchekasị.
Egwuregwu TPU / EVA / PEVA Hydration Outdoor Sport
Elu arụmọrụ n'èzí egwuregwu mmiri akpa. Nnukwu mmiri na-agba mmiri na-agba mmiri, dị mfe iji. Ihe nchekwa na enweghị ụtọ, na-enye gị ahụmịhe kachasị mma. Ihe nkedo na ntanetị na-akpaghị aka na-emechi mgbe ọ na-ejighị ya. Enwere ike idozi ọkpọ mmiri na akpa akpa ume, nke dị mfe iji mejupụta mmiri n'oge mmega ahụ.